Dadka sharci-darrada ah xaq ha loo siiyo daryeel caafimaad oo wanaadsan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadka sharci-darrada ah xaq ha loo siiyo daryeel caafimaad oo wanaadsan
Publicerat fredag 5 april 2013 kl 14.54
Shirweynaha xisbiga Sooshiyaal dimoqraadiga ayaa markii ugu horreysey lagu go’aamiyey sidii ay dadka sharci-darrada dalka ku jooga xaq ugu yeelan lahaayeen ”daryeel caafimaad oo wanaagsan”. Sidaas ayuu xisbigu mowqif cad uga qaatay hindise ay ku heshiiyeen dowladda isbahaysiga ah iyo xisbiga deegaanka oo dayrta la horkeeni doono baarlamaanka.
Lena Hallengren oo xildhibaan sooshiyaal-dimoqraadiga uga ah baarlamaanka ayaa tiri in ay tahay markii ugu horreysey oo uu xisbigu caddeysto in uu taageersan yahay hindisahaan.
- Su’aashaan waxaa wax laga qaban doonaa oo la xallin doonaa dayrta soo socota kolkaas oo looga codayn doono baarlamaanka. Shirweynaha sooshiyaal-dimoqraadigu horay ugama uusan qaadan mowqif sidaan oo kale ah. Siyaasaddani waxay hadda taageero ka haysataa wakiilada sooshiyaal-dimoqraadiga ee ku sugan shirweynaha.
Lena Hallengren ayaa sheegeysa in arrintaan laga yeeshay dood aad u gaaban. Taas oo muujineysaa in si ballaaran loo taageersan yahay in dadka sharci-darrada ah lagu qaabbilo hab xushmad leh.
- Dadka magangelya-doonka ah iyo kuwa sharci-darrada ahba waa in ay helaan daryeel caafimaad oo wanaagsan. Wax walba sidii la doonayey mar walba uma hirgalaan laakiin waa ay caddahay in shirweynuhu taageersan yahay siyaasadda uu xisbiga sooshiyaal-dimoqraadigu ka wado baarlamaanka. Siyaasaddani waxay dhab ku noqon doontaa hindisaha ay dowladdu la waddo xisbiga deegaanka. Taas micneheedu waxa weeye in siyaasaddan ay taageersan yihiin xisbiyada dhammaantood marka laga reebo xisbiyada sverigedemokraterna iyo vänsterpartiet, ayey hadalkeedii ku soo xirtay xildhibaan Lenna Hallengren.
Weriye: Alberico Lecchini